दातको दुखाई कम गर्ने र दातको किरा बाहिर निकाल्ने घरेलु उपाय::mirmireonline.com
दातको दुखाई कम गर्ने र दातको किरा बाहिर निकाल्ने घरेलु उपाय
दातमा भएको किटाणु (किरा) बाहिर निकाल्ने उपाय
यदि तपाईको दात किराले खाएको छ भने आज हामी तपाईहरुलाई केहि घरेलु उपाय बताउन गैरहेका छौं जसको प्रयोगले तपाई आफनो दातमा भएको किटाणुलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ । त्यसको लागि तल दिएको सामाग्रीहरु आवश्यक पर्छ ।
लवांग को तेल 10 मिली लीटर
फिटकरी पाउडर 20 ग्राम
लवांगको तेल र फिटकिरीलाई राम्ररी मिश्रण गरेर एउटा पेस्ट तयार पार्नु होस । तयार भएको पेस्टलाई किराले खाएको दातमा १० मिनेट लगाएर छोड्नुहोस । १० मिनेट पछि सफा पानीले कुल्ला गर्नुहोस ,पानीको साथमा तपाईको दातमा भएको किरा बाहिर आउनेछ ।
दातको दुखाईबाट १ मिनेटमा राहत
यदि तपाईको दातको दुखाई एकदमै धेरै छ भने लवांगको तेललाई दुखेको ठाउमा लगाएर राम्ररी १ मिनेटसम्म मालिश गर्नुहोस ,एक मिनेट पछि दुखेको ठाउमा राहत पाउनु हुनेछ । यदि एक पटकमा तपाईको दुखाई कम भएन भने यस प्रक्रियालाई तिन चार पटक पनि अपनाउन सक्नुहुनेछ । हामीलाई आशा छ एक पटक मै तपाईको दुखाई कम हुनेछ तर भएन भने तीन चार पटकमा पक्का दुखाई कम हुनेछ ।
टाउको दुख्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? यी हुन् अचुक उपायहरु
ढाड, कम्मर दुख्ने समस्या छ ? यसो गर्नुहोस्
चिकित्सक संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हड्ताल गर्नु अमानवीय कार्यः रावल
कुनै हालतमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल, भन्छन्- स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनशन र हडताल अनुचित